Al-shabaab Oo Sheegatay Qarax Xalay Ka Dhacay Duleedka Dekedda Muqdisho Iyo DAACISH Oo Soo Bandhigtay Nin Boosaaso Isku Qarxiyey | Berberatoday.com
Al-shabaab Oo Sheegatay Qarax Xalay Ka Dhacay Duleedka Dekedda Muqdisho Iyo DAACISH Oo Soo Bandhigtay Nin Boosaaso Isku Qarxiyey
Muqdisho(Berberatoday.com)-Qarax xooggan, ayaa gelinkii dambe ee Shalay ka dhacay maqaaxi ku taala ka soo horjeedka Dekedda Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya.
General Axmed Xasan Maalin, oo ah Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Banaadir, ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen qaraxaasii, halka toban kalena ay ku dhaawacmeen.
General Axmed Xasan Maalin, waxa uu sidoo kale xusay in khasaaraha uu badan karo maaddaama Qaraxa uu saameeyay Tukaamo iyo Maqaaxi kale oo ku yaalla halka uu Qaraxu ka dhacay.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda Qaraxaasi, waxa ayna sheegtay in lagu beegsaday Qaraxa Saraakiil ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda. Waxay intaa ku dartay Al-shabaab in Qaraxa uu khasaare ka soo gaadhay Saraakiisha Nabad-Sugidda, inkastoo ayna jirin warar xaqiijinaya in Saraakiil ay wax ku noqdeen Qaraxaasi.
Dhanka kale, Koox taageerta DAACISH oo ka dagaalama deegaannada Mamaulka Puntland, ayaa sheegatay Masuuliyadda Qaran Khasaare badan dhaliyey oo habeen hore Fiidkii ka dhacay Magaalada Boosaaso.
Kooxda Daacish taageerta oo hore u qabsatay Degmada Qandala, ayaa soo bandhigtay Magaca, Sawirka iyo Qabiilka uu ka soo jeeday Ninkii isku Qarxiyey Magaalada Boosaaso habeen hore Fiidkii.
Kooxdan ayaa Ninka isku Qarxiyey Boosaaso Magaciisa ku sheegtay Abu Quddaama, Magacaasi oo ah Magaca looga yaqaanay Kooxda Daacish taageerta dhexdeeda, waxayna sheegtay inuu ka dhashay Beesha Mareexaan.
Maamul-gobolleedka Puntland ayaan illaa hadda ka hadal Qaraxaasi oo sababay Dhimashada Shan Ruux iyo Dhaawaca Tiro badan, marka laga reebo Xaqiijinta khasaarihiisa oo uu habeen hore si kooban uga hadlay Taliyaha Booliska ee Magaalada Boosaaso.
Qaraxaasi oo lala beegsaday Bar-kaantarool oo Mashquul badan oo Gaadiidka lagu baadho oo ku taalla Magaalada Boosaaso, ayaa waxa ku dhintay Shan Qof oo uu ku jiro Ninka Is-qarxiyey, Hal Askari oo Boolis ah iyo Saddex Qof oo Rayid lagu sheegay.